Abshir Osman"Kalsooni uma hayo Anna Kinberg Batra" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Abshir Osman oo goolaha degaanka degmada Eskilstuna u fadhiya xisbiga Moderaterna. sawir: Sawir gaar loo leeyahay.
Abshir Osman"Kalsooni uma hayo Anna Kinberg Batra"
Dooda xisbiga M ka taagan.
La daabacay torsdag 24 augusti 2017 kl 12.32
Maalmihii ugu dambeeyay ayey xisbiga Moderaterna ka dhalatay dood ku saabsan in aanay hogaamiyaha xisbiga Anna Kinberg Batra ku habooneyn in ay xisbigan hogaamisu iyada oo ay sii yaraanayaan inta qof ee taageeri lahaa xisbigan hadii ay maanta doorasho dhici laheeyd.
-Anna Kinberg Batra maaha qof xun am aan aqoon lahayn, laakiin kalsoonidii loo qabay in ay xisbigan hogaamin karto ayaa yaraatay, markaa waan ku raacsanahay gobolada raba in hogaamiye kale lagu bedelo. Sidaas ayuu sheegay Abshir Osman oo goolaha deegaanka Eskilstuna u fadhiya xisbiga Moderaterna.
Tirokoobkii ugu dambeeyay oo ay shirkada saadaalinta Sifo arrinkan ka sameeysay ayaa sheegay in xisbigani ku taagan yahay boqolkii ba 16 oo u codeeyn lahaa. Sido kale ayey boqolkiiba 6 keliya aaminsan-yihiin in ay Anna Kinberg Batra ku haboonaan laheeyd in ay waddanka hogaamiso hadii ay xisbiyada mucaaradka ee Alliansen ku guuleysan-lahaayeen doorashada sannadka dambe.
Dhanka kale ayey xisbiyada casaan-cagaarka, S iyo MP, oo hogaanka hadda ku fadhiya, ku taagan yihiin boqolkiiba 29 taageerada codbixiyeyaasha halkey xisbiga Sverigedemokraterna haystaan taageero ah boqolkiiba 18.
-Waxaa ay ila tahay in ay maalmaha soo socda soo badanayaan laamaha xisbiga ee gobolada doonaya in hogaanka laga qaado Anna kinberg Batra, waa sida uu yidhi Abshir Osman.